ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ရန် Beginners Guide - အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ! - ဂျပန်ကတ်ကြေး
ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ရန် Beginners Guide - အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ!
ဂျိမ်းအဒမ်အားဖြင့်ဖြစ်သည် နိုဝင်ဘာလ 06, 2020 ဖတ်ပြီးသားမိ 5
ဆံပင်ညှပ်ရန်သင်လေ့လာနေပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်သင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည်။ ဆံပင်ညှပ်နေစဉ်များစွာသောအရာတို့သည်မှားယွင်းသွားနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ဆံပင်ကိုမဖြတ်မီ၎င်းအကြောင်းလေ့လာရန်ငွေပေးချေသည်။
ဆံပင်ညှပ်ခြင်းအတွက်ပုံစံညှပ်များပါ ၀ င်ခြင်း
သင်သည်ဆံပင်ညှပ်ရန်ကတ်ကြေးဟောင်းတစ်လုံးကိုအသုံးပြုနေပါက၎င်းကိုယခုမလုပ်ပါနှင့်။ ကတ်ကြေးအဟောင်းများသည်အစိုင်အခဲများကိုဖန်တီးပြီးသင့်ဆံပင်ပုံစံကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ပုံစံညှပ်တစ်စုံကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။ သငျသညျစုံလင်သောဆံပင်ညှပ်ပေးလိမ့်မယ်တဲ့အတိအလင်းဒီဇိုင်းပုံစံညှပ်တစ်စုံကိုရနိုင်သည်။ လက်ျာကတ်ကြေးတစ်ချောင်းနှင့်ဖြတ်သောအခါဆံပင်သည်ယခင်ကထက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။
ဆံပင်ညှပ်ခြင်းစတင်သောအခါသင်လိုချင်သောအဆင့်သို့တိုက်ရိုက်မဖြတ်ပါနှင့်။ သင်ဖြတ်ချင်သောထက်လျှော့။ အမြဲတမ်းစတင်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလိုအပ်မယ်ဆိုရင်သင်ကဆံပင်ကိုပိုပြီးဆံပင်ညှပ်နိုင်တယ်၊ သင်နှင့်မသင့်တော်ဟုထင်ရသည့်အထိတိတိကျကျဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုတဖြည်းဖြည်းလုပ်ဆောင်ပါ။
အကယ်၍ သင်ဆံပင်ကိုစိုစွတ်လာသောအခါဆံပင်ညှပ်လျှင်ခြောက်သွေ့သောအခါ ပို၍ တိုသည်ကိုသတိရပါ။
ဆံပင်ညှပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာသဘာဝဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းကိုဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ဆံပင်ကကောက်ပဲ၊ ခြောက်သွေ့တဲ့အခါသူတို့ကိုဖြတ်ပစ်လိုက်။ နောက်ဆုံးအဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏ဆံပင်ဖြောင့်မှန်လျှင်သူတို့ကိုရေမှုန်ရေမွှားပုလင်းဖြင့်စိုပြီးဆံပင်ကိုညှပ်ပါ။
အဆိုပါ Split ကိုအဆုံးချုံ့
လှပသောဆံပင်ပုံစံကိုထိန်းသိမ်းရန်အခါအားလျော်စွာဆံပင်ညှပ်ခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ရက်အနည်းငယ်ကြာဆံပင်ညှပ်ပြီးတဲ့နောက်သင့်ရဲ့ဆံပင်ပုံစံကိုရှုပ်ထွေးစေတဲ့အပိုင်းအစတွေပေါ်လာနိုင်တယ်။ ဆံပင်အရှည်မဆုံးရှုံးဘဲအနီးကပ်ဆံပင်ပုံစံရရန်သူတို့ကိုသင်ချုံ့နိုင်သည်။
သင့်ဆံပင်ခြောက်သွေ့တဲ့အခါပိုင်းခြားပိုင်းခြားထားတာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဦး စွာ၊ ဆံပင်အပိုင်းများကိုအပိုင်းလိုက် ခွဲ၍ ဖြန်းပါ။ ဆံပင်တစ်ဖက်မှ စတင်၍ အခြားတစ်ဖက်သို့တဖြည်းဖြည်းရွှေ့ပါ။ အခုတော့ဆံပင်အပိုင်းကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လှည့်ပါ၊ ပြီးတော့သူကအစက်အပြောက်တွေကိုဖော်ပြလိမ့်မယ်။ သင်၏ဆံပင်ကိုထိပ်ကနေလှည့်ပတ်ပြီးကြိုး၏အောက်ခြေကိုရွှေ့ပါ။ လိမ်ပြီးတာနဲ့လိမ်ဆံပင်ကနေခွဲထွက်အစွန်အဖျားကိုချုံ့ရန်, သင်တုန်း - ဓါးကတ်ကြေးအသုံးပြုပါ။
သင့်မှာထူထဲပြီးကောက်သောဆံပင်ရှိလား။ ကောက်သောဆံပင်နှင့်သပ်ရပ်လှပသောပုံရိပ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်မှာစိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်သော်လည်းသင့်ဆံပင်ကိုညှပ်ခြင်းဖြင့်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသင်၏အလွှာများကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲ ထား၍ သပ်ရပ်သောအသွင်သဏ္toာန်ရရန်ဆံပင်အဆုံးကိုဖြတ်တောက်ပါ။
ဖြတ်အလွှာများ - Ponytail သုံးခြင်း
သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဆံပင်ညှပ်ချင်ပါသလား အလွှာများရရှိခြင်းသည်သင်၏ဆံပင်ပုံစံကိုလန်းဆန်းစေသည့်နည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှေ့ဆံပင်အနီးရှိ ဦး ခေါင်းထိပ်တွင်ကြံ့ချိုအိတ်ငယ်တစ်ခုဖန်တီးပါ။ ယခုတွင်သင်၏ဆံပင်ကိုရှေ့တွင်လှဲ။ ပြီးအောင်ဖြတ်လိုက်ပါ။ သင်ထောင့်အားကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်မျက်နှာပုံရိပ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံဖြစ်သည်။
သင်၏ဆံပင်ကိုပခုံးအနိမ့်အမြင့်ဖြတ်ပေးခြင်းသည် bob ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်များစွာဆင်တူသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင်၏ဆံပင်အပိုင်းကိုဖန်တီးပါ၊ ဆံပင်များချိတ်ထားသည့်အခန်းများကိုလုံခြုံစွာ ထား၍ ရှေ့သို့ယူဆောင်ပါ။ ထို့နောက်ဖြတ်တောက်ညှပ်သုံးပြီးစွန်းဖြတ်။ ပခုံးအရှည်ဆံပင်ညှပ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြတ်တောက်နေတဲ့အဆုံးတွေကိုအသေးအဖွဲလေးတွေနဲ့သန့်ရှင်းပါ။ သင်၏ဆံပင်ကိုသန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးလိမ့်မည်။
pixie ဖြတ်တိုရှိလား။ ၎င်းကိုအမြဲတမ်းကြော့ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ရန်သင်ထိန်းသိမ်းထားရန်လိုအပ်သည်။ ကောင်းတဲ့အပိုင်းကတော့သင်လုပ်နိုင်တာကအလှပြင်ဆိုင်ကိုမသွားဘဲလုပ်နိုင်တယ်။ ဆံပင်တွေကိုအညီအမျှခွဲထား၊ ဆံပင်ကိုညှပ်ပြီးဆံပင်ကိုဂရုတစိုက်ဖြီးပါ။ ထို့နောက်ဖြီးမှထွက်သောမည်သည့်အပိုင်းအစကြီးများသို့မဟုတ်ကြမ်းတမ်းသောဆံပင်ကိုမဆိုဖြတ်တောက်ပါ။
သင်၏အလှပြင်ဆိုင်သို့သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခရီးစဉ်များအကြား၌သင်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဆံပင်ပုံစံကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။ ဆံပင်ညှပ်ခြင်းအတွက်အပတ်တိုင်းပြီးနောက်သင်အလှပြင်ဆိုင်သို့သွားခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ဆံပင်ညှပ်ရန်အတွက်အလှပြင်ဆိုင်သို့သွားရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်၏အိမ်တွင်လည်းလုပ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်အလုပ်များလွန်းသည်ဟုဆိုပါကပိုမိုလွယ်ကူ။ အလုပ်လုပ်ရန် ပို၍ လွယ်ကူသောကြောင့်စိတ်မပူပါနှင့်။ သင်၏ဆံပင်ကိုအိမ်တွင်ချုံ့ခြင်းအားဖြင့်၊ အချိန်နှင့်ငွေများများစွာသက်သာနိုင်သည်။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖြတ်တောက်ခြင်းထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများစုဆောင်းပါနှင့်အာကာသကို set up ။
ဆံပင်ညှပ်ရာတွင်အသုံးပြုသောရိုးရှင်းသောနည်းစနစ်မှာ“ search & destroy” နည်းဖြစ်သည်။
အခြားနည်းလမ်းမှာ“ လှည့်ကွက်များနှင့်ချုံ့ခြင်း” နည်းပညာဖြစ်သည်။
သင်ပထမတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဒုတိယတစ်ခုရွေးနိုင်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သင်၏ဆံပင်ပုံစံကွဲများကိုရှာဖွေ။ ဖြတ်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်။
တုံး Bob ဆံပင်ဖြတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း
အလွယ်ကူဆုံးဆံပင်ညှပ်စက်တစ်ခုမှာ Bob ဖြစ်သည်။ Bob ဆံပင်ပုံစံကိုဖြတ်ရန်နှင့်ပြုပြင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ Bob ဆံပင်ညှပ်တိုတိုနှင့်ဖြောင့်ဆံပင်မှအလွယ်တကူပေးထားသည်။ ဒါပေမယ့်ဆံပင်ရှည်တာတောင်မှဆံပင်တိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုကိုတိုတို bb bob ဖြတ်ရနိုင်တယ်။ Bob bob ကိုဖြတ်တောက်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အကယ်၍ သင်၏ဆံပင်ကိုတုံးတုံးဖြတ်လိုလျှင်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
ဖြီးသုံးခြင်းဖြင့်သင်၏ဆံပင်ကိုအပိုင်းသုံးပိုင်း ခွဲ၍ ဆံပင်များနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ
သင်လိုချင်သည့်ပုံသဏ္onာန်ပေါ် မူတည်၍ သင်၏ဆံပင်ကိုညှပ်ပါ
ကွဲပြားခြားနားသောဆံပင်ညှပ်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများကိုသင်နားလည်ကြောင်းသင်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဒီလမ်းညွှန်မှာဖော်ပြထားတဲ့နည်းလမ်းတွေအတိုင်းသင်လိုချင်တဲ့ဆံပင်ပုံစံတစ်မျိုးပေးပြီးအဆင့်တွေကိုစနစ်တကျလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကောင်းမွန်သောဖြတ်တောက်မှုကိုရရှိရန်သင့်လျော်သောဖြတ်တောက်ခြင်းအထောက်အကူပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပါ။